गार्डेन राई आइतबार, २६ जेठ २०७६
काठमाडाैं : हरेक मानिसको आ–आफ्नै संघर्षको छुट्टै कथा हुन्छ । त्यो कथामा हरेकको आफ्नोे जीवन हुन्छ । अनि त्यो जीवनकथा आफैँलाई सुनिरहूँ र अरूलाई पनि सुनाइरहूँ लाग्छ । सोचिन्छ, मेरो कथा अनि संघर्ष अरूको भन्दा नौलो अनि खास छ र यसलाई जीवन्त बनाइराख्नुपर्छ । यस्तै एउटा आफ्नोे छुटै कथा छ, मोडल रविन मगरको ।
आफू सानो हुँदा चलचचित्रका सिडी किनेर गाउँको हलमा चलचित्र देखाउने काम गर्दै आएका रविन थापा मगर आफूलाई पनि पर्दामा देखिँदा कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर मनमनै सोच्ने गर्थे । उनले यो कुरा सोचेर मात्र बसेनन्, सोचेको कुरालाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ आफ्नोे गृहजिल्ला सोलुखुम्बू छाडेर सपना पूरा गर्न वि.सं. २०६७ सालमा राजधानी काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाउन आइपुगे ।
‘काठमाडौं मैले सोचको जस्तो थिएन । यहाँ आएर पनि धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो । साधारण परिवारमा हुर्केको म । लाहुरेमा भर्ती जानका लागि परिवारबाट दबाब आउँथ्यो, तर म हिरो बन्न चाहन्थेँ’, रविन भन्छन्, ‘काठमाडौं आएपछि मोबाइल तथा कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयरको काम गर्न सुरु गरेँ । तर मेरो चाहना अभिनयमा थियो ।’
आफैँले काम गर्दै पैसा जम्मा गर्दै उनले अभिनय सिक्न सुरु गरेका थिए । चञ्चले र मिजासिलो स्वभावका मगर सानै उमेरदेखि कला क्षेत्रमा असाध्यै रुचि भएका कारण गाउँमा हुँदा विद्यालयमा आयोजना हुने कार्यक्रम तथा देउसी–भैलो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गर्थेे । उनी भन्छन्, ‘सानै उमेरदेखि नाच्ने गरेका कारण अभिनय सिक्नमा केही मात्रामा सहज भयो ।’
स्वर्गीय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको अभिनयबाट प्रभावित भएका मगर ‘सञ्जिवनी’ नामक एक टेलिसिरियलबाट आफूले अभिनय सुरु गरेको बताउँछन् । यस्तै दिलीप रायमाझीको नृत्य र अभिनयबाट पनि आफू धेरै मात्रामा प्रभावित भएको बताउने मोडल मगर पहिलो पटक क्यामरा अगाडि आफ्नोे अभिनय कैद हुँदा लजाएको र डराएको अनुभव सुनाउँछन् ।
तर आफूसँग भएको आत्मविश्वासले गर्दा अभिनयमा आफू केही सफल भएको अनुभव सुनाउँदैै अहिले क्यामरा नै आफ्नोे साथी भएको सुनाए उनले । ‘माया लगाउन अमेइजिङ’, ‘किन हो किन तिम्रै झल्को तिमै्र सम्झना’ लगायतका दर्जनौं गीतमा अभिनय गर्नुका साथै ‘सपना तिम्रो मेरो’ चलचित्रमा समेत अभिनय गरेका छन् ।
मेहनत गर्न सके असम्भव केही हुन्न भनेजस्तै रविनले पनि आफ्नोे रुचिसँगै उद्देश्य प्राप्तिका लागि जति पनि संघर्ष गरे ती सबै पूरा हुँदै गएका छन् । आफ्नोे आत्मविश्वास र मेहनतले गर्दा धेरै कुराहरू सम्भव बनाउन सफल भएका छन् । आजसम्म उनले दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरू गरेका छन् भने सयौँको संख्यामा म्युजिक भिडियोहरूको छायांकन समेत गरिसकेका छन् ।
कलाक्षेत्रमा नै आफ्नोे भविष्य देख्ने मोडल रविन अब ठूलो पर्दामा कलाकार दयाहाङ राईलगायत अन्य कलाकारसँग काम गर्ने इच्छा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अभिनय हेर्दा सहज भए पनि आफूले गरेर देखाउन गारो कुरा हो । मैले अझै सिक्नु छ । ज्ञान र सीप भन्ने कुरा जति सिक्यो त्यति जानिने कुरा पनि हो । त्यसैले अभिनय जति सिक्यो उति नै आफूलाई निखार्न सकिन्छ । सधैँ काम लागिरहन्छ ।’
मोडल रविन भन्छन्, ‘जीवनमा केही गर्ने हरेकको सपना र चाहना हुन्छ । बस् फरक यत्ति हो, कतिको सपना पूरा हुन्छ त कतिको अधुरो नै रहन्छ । ती सपना पूरा गर्न दिनरात कति संघर्ष गरिन्छ, संघर्ष अनुसार प्रतिफल पनि पाइन्छ र पाइँदैन पनि ।’
आफ्नोे उद्देश्य प्राप्तिका लागि निरन्तर अनवरत संघर्षका पाइला चालिरहने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘मेरा लागि इज्जत, पैसाभन्दा ठूलो कुरा हो । मेरो नाम र काम मेरो सात पुस्ताले पनि थाहा पाऊन् ।’
उनी कुरा जोड्छन्, ‘एउटा भनाइ पनि छ, आशा गर्नु भरोसा नगर्नु । केही पाउनका लागि जीवनमा कयौँ यस्ता संघर्ष गरिन्छ, जुन प्राप्त हुँदैनन् । सायद यही हो कि जीवन । तर समय आफनै रफ्तारमा चलिरहेको छ र चलि नै रहन्छ...’
कला क्षेत्रमा सुनौलो भविष्य देखेर अघि बढिरहेका मोडल रविनको संघर्षको कथालाई छोटकरीमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेँ । जीवनको कथा भनौँ कि भोगाइ भनौँ यसलाई, जे भने पनि जीवनका अनुभवहरूलाई भनेर अनि लेखेर कहिल्यै पनि सकिन्न । साध्य पनि हुन्न रहेछ । यी सबै आफूले बुझ्ने अनि भोग्ने कुराहरू हुन् । गरे के पो हुन्न भनेजस्तै हरेक असम्भवलाई सम्भव बनाउनका लागि आफूमा विश्वास बढाउँदै, मेहनत गर्दै, आत्मविश्वासका खुड्किलाहरू थप्दै, सफलताको चुली भर्दै जानुहोला । शुभकामना ।
'ए सानी'मा समीक्षासँग राेमान्स गर्दै गजित र गम्भीर (भिडियाेसहित)
‘छक्का पञ्जा–२’ युट्युबमा (भिडियो सहित)
त्रिभुवन विश्विवद्यालयअन्तर्गत 'नेपाल फिल्म क्याम्पस' सञ्चालन
अब जिग्री पाँडेकाे सक्किगाे नि !
१२ विधामा ‘सूर्य अवार्ड’ बाँडिने
भद्रगोलको नयाँ एपीसोडमा लाइकभन्दा डिस्लाइक धेरै